Nanafika ny banky Beirut ireo mpanao fihetsiketsehana, 'navotsotra' $ 180K 'nangalarina' tamin'ny vahoaka libaney
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Libanona » Nanafika ny banky Beirut ireo mpanao fihetsiketsehana, 'navotsotra' $ 180K 'nangalarina' tamin'ny vahoaka libaney
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana Libanona • Vaovao • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Tao amin'ny lahatsoratra Facebook, nilaza ny Fikambanana Banin Charity Association fa 'nahatratra' $ 180,000 teo ho eo, izay nolazain'izy ireo fa 'norobain'ny banky' tamin'ny olona mahantra.
Mitaky ny fahazoana vola 'voaroba' avy amin'ny vahoaka Libanona ny mpanao fihetsiketsehana.
Nantsoina tany an-toerana ny polisy mba hanala ireo mpanao fihetsiketsehana tao amin'ilay trano ary hanakanana ny lalana manodidina.
Tao anaty fanambarana iray dia nilaza ny banky fa telo amin'ireo mpiasan'izy ireo no naratra vokatr'io korontana io.
Banky Soisa Libaney tao Beirut dia notafihan'ny mpanao fihetsiketsehana feno hatezerana 'am-polony' izay nitaky ny fahazoana vola an'aliny dolara 'voaroba' avy amin'ny vahoaka Libanona.
Lahatsary avy any amin'ny faritr'i Hamra renivohitra Libaney tamin'ny alatsinainy dia nanambara fa nisy olona nanafika ny mpiasan'ny banky ary nanipy antontan-taratasin'ny banky teo am-baravaran'ilay trano.
Ny sora-baventy mampiseho hafatra milaza fa nangalatra ny volan'ny olona ny banky dia hita ihany koa nihantona teo am-baravaran'ny banky, ary koa ny fihetsiketsehana mpanao fihetsiketsehana manoloana ny tranobe.
Ny horonantsary hafa navoakan'ny fampahalalam-baovao teo an-toerana dia niseho mba hampisehoana ireo mpanao fihetsiketsehana mandehandeha manodidina ny banky sy hiditra amin'ny efitrano malalaky ny trano.
Raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana dia nisy haintrano niseho koa tao anatin'ny banky.
Ny Banky Soisa Libaney dia nilaza fa ny ONG an'ny fikambanana Banin Charity Association dia nibata ny sampan'i Hamra. Nilaza ihany koa ny fikambanana fa tompon'andraikitra tamin'ny hetsika Alatsinainy.
Tao anaty fanambarana iray dia nilaza ny banky fa telo tamin'ireo mpiasan'izy ireo no naratra vokatr'io korontana io, anisan'izany ny iray naiditra hopitaly noho ny vaky tarehy roa mitaky fandidiana.
"Lehilahy sahabo ho zato ao amin'ny Fikambanana Fanasoavana Banin no nibodo ny fananganana ny fitantanan-draharahan'ny bankinay, nanafika ny mpiasanay," hoy ny valin'ny banky.
Nilaza ihany koa ny banky fa norahonana herisetra ireo mpitantana ny sampana raha tsy mamindra vola any ivelany izy ireo.
Vokatry ny fanaovana fahirano ny banky ny Alatsinainy teo dia nilaza ny Fikambanan'ny Banky any Libanina fa ny andrim-panjakana ara-bola hafa dia hakatona amin'ny talata izao amin'ny hetsika firaisankina amin'ny sampana fahirano.
Nanjary fahita matetika ny korontana sy ny fihetsiketsehana any Libanona satria nirongatra krizy ara-toekarena ny firenena, niharatsy noho ny resaka kolikoly ataon'ny governemanta, ny areti-mandringana, ny korontana ara-politika, ary ny fipoahana nandrava tao amin'ny Port of Beirut tamin'ny volana aogositra lasa teo.
Ny firenena koa dia miatrika tsy fahampian'ny sakafo sy ny fanafody.
Betsaka ny hetsi-panoherana natao tamin'ny faran'ny herinandro ho valin'ny fanapahan-kevitry ny governemanta hampihena bebe kokoa ny sandan'ny pounds Libanona raha oharina amin'ny dolara.